မူလစာမျက်နှာ - Saferworld
သတင်းနှင့် အရင်းအမြစ်များ (မြန်မာ)
Photo credit: Swe Zin
ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သည် လူတိုင်းဘေးကင်းလုံခြုံရေးဖြစ်သည်။
Saferworld သည် လွတ်လပ်၍ အနှောင်အဖွဲ့ကင်းသည့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်း (၃၀)ကျော် ပဋိပက္ခ ကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့် ပိုမိုဘေးကင်းလုံခြုံသည့် ဘဝများကို တည်ဆောက်ရန် တစိုက်မတ်မတ်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
အာဖရိက၊ အာရှ နှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတို့တွင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်။
ကရင်လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့နှင့် Saferworld အဖွဲ့တို့မှ ကိုဗစ်-၁၉ နှင့် ပတ်သက်သည့်ပညာပေးကာတွန်းဗီဒီယိုကို ကရင်ဘာသာစကား (မြန်မာစာတန်းထိုး) ဖြင့်ပူးပေါင်းထုတ်ဝေလိုက်ပါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်ကာလအတွင်းလက်နက်ကိုင်များ၏တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့်လိုက်နာရမည့်လမ်းညွန်ချက်များကိုအသိပညာပေးထား သောဗီဒီယို အတိုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ကရင်လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့နှင့် Saferworld အဖွဲ့တို့မှ ကိုဗစ်-၁၉ နှင့် ပတ်သက်သည့်ပညာပေးကာတွန်းဗီဒီယိုကို ကရင်ဘာသာစကား (မြန်မာစာတန်းထိုး) ဖြင့်ပူးပေါင်းထုတ်ဝေလိုက်ပါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတင်းအမှားများကိုမဖြန့်ဝေမိစေရန် ၊ မယုံမိစေရန်နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသည့်သတင်းအရင်းအမြစ်များကိုမည်သို့ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပုံကိုအသိပညာပေးထား သောဗီဒီယိုအတိုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Covid-19 ကာလကို အချင်းချင်း ဖေးမကူညီမှုတွေနဲ့ ကျော်လွှားကြရအောင်
လူမှုဝန်းကျင်လုံခြုံမှု ကာတွန်းသရုပ်ဖော် လက်စွဲစာအုပ်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ လုံခြုံရေးကဏ္ဍအား ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ဖော်ဆောင်ခြင်း - တည်မြဲသည့်အမွေအနှစ်များနှင့် ရှေ့ဆက်ရမည့်ခရီးရှည်
မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းဒေသမှ လုံခြုံရေး၊ တရားမျှတရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး - အပစ်အခတ်ရပ်စဲထားသောဒေသများမှ အသိအမြင်၊ သဘောထားများနှင့် အလေ့အထများ ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်းစစ်တမ်း
၂၀၁၂ ခုနှစ်ကတည်းက Saferworld သည် မလုံခြုံမှုနှင့် တရားမမျှတမှုကို လူထုအခြေပြုနည်းလမ်းဖြင့် တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်မှုကို အားပေးမြှင့်တင်ရန်နှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကို အတူတကွပူးတွဲဖြေရှင်း ရမည့် လူထုလူတန်းစားများနှင့် အာဏာပိုင်များအကြား ပေါင်းကူးဆက်ဆံရေး ပိုမိုအားကောင်းလာစေရန် ပဋိပက္ခဒဏ်သင့် လူမှုအသိုက်အဝန်းများအကြားရှိ မိတ်ဖက်အရပ်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများကို ပံ့ပိုးကူညီလာ ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက် လက်လှမ်းမီနိုင်ရေးနှင့် အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှု အလေ့အထများ ကျယ်ပြန့်လာစေရန် Saferworld သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံ၏ လုံခြုံရေးနှင့် တရားရေး ကဏ္ဍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ စာတမ်းပေါင်း ၁၅ စောင်ကို ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပြီးဖြစ် သည်။
ဤစာမျက်နှာပေါ်၌ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှု၊ လုံခြုံရေး၊ အမျိုးသမီး-အမျိုးသားရေးရာနှင့် တရားမျှတမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်သည့် နောက်ဆုံးရအခြေအနေများနှင့် ကောက်နုတ်ချက်များ နှင့်အတူ အစီရင်ခံစာများ၊ သုံးသပ်ချက်များနှင့် ဘလော့ဂ်(Blogs)များ အပါအဝင် Saferworld ၏ မြန်မာ ဘာသာဖြင့် ရေးသားပြုစုထားသည့် အရင်းအမြစ်များကို ရှာဖွေဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
ပဋိပက္ခဒဏ်သင့် နယ်မြေဒေသများရှိ လူထုလူတန်းစားများ ဘေးကင်းလုံခြုံရေး
အမျိုးသမီး-အမျိုးသားရေးရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေး
သုတေသန၊ မူဝါဒနှင့် နည်းပညာအရထောက်ပံ့ကူညီမှု
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း Saferworld ၏ စည်းရုံးအရေးဆိုမှုသည် ကျောင်းသားများနှင့် နယ်ပယ်အလိုက်ကျွမ်း ကျင်သူများ၊ CSO များ၊ သုတေသီများ၊ ပညာရေးနယ်ပယ်မှပညာရှင်များ၊ INGO ဝန်ထမ်းများနှင့် နိုင်ငံရေး၊ လုံခြုံရေး၊ ပဋိပက္ခနှင့် အခြားသက်ဆိုင်ရာ ခေါင်းစဉ်များ၌ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသူများ သို့မဟုတ် လေ့လာလိုက်စားသူများကို အလေးပေးအာရုံစိုက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လမ်းကလေး Podcast ကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာ့မူဝါဒရေးရာ အကြံပေးအဖွဲ့များနှင့် အရပ်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ S&JSR/G ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာလူထုများအကြား ဆွေးနွေးပြောဆိုခြင်းနှင့် ဗဟုသုတမျှဝေခြင်းပြုလုပ်ရာ၌ တစ်ဖက်တစ် လမ်းမှ ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်သွားရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။
အပိုင်း ၁ ။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လုံခြုံရေးနှင့် တရားမျှတရေးများနှင့်ဆိုင်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဒီမိုကရေစီနည်းကျဖော်ဆောင်ခြင်း
အပိုင်း ၂ ။ လုံခြုံရေးကဏ္ဍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို ပုံဖော်ကြည့်ခြင်း - ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဖယ်ဒရယ် ဒီမိုကရက်တစ် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်သစ်ဆီသို့ (အပိုင်း ၁)
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လုံခြုံရေးနဲ့တရားမျှတရေးကို ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ဖော်ဆောင်ခြင်း - စာရေးသူ Kim Jolliffe နှင့် အင်တာဗျူး
ကျား၊မ ရေးရာ ကဏ္ဍ၊ COVID-19 ဖြင့် ဆက်နွယ်မှု နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ကရင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းဒေသ အပေါ် စီးပွားရေး အကျိုးသက်ရောက်မှုများ
တရားရေးစနစ်ကို လက်လှမ်းမီနိုင်မှုနှင့် လူထုအခြေပြုရဲလုပ်ငန်း
ကျွန်ုပ်တို့သည် ပဋိပက္ခဒဏ်သင့် နယ်မြေဒေသများရှိ လုံခြုံရေးနှင့် တရားရေးအာဏာပိုင်များကို ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်ရန်၊ ပိုမိုတာဝန်ခံမှုရှိစေရန်၊ အားလုံးပါဝင်မှုရှိစေရန်နှင့် ရပ်ရွာဗဟိုပြုဖြစ်စေရန်အတွက် မိတ်ဖက် CSO အဖွဲ့ အစည်းများမှတစ်ဆင့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ဤနေရာ၌ ဓလေ့ထုံးတမ်း နှင့် တရားဝင်တရားရေးအဖွဲ့အစည်းများကို လေ့ကျင့်သင်တန်းပေးခြင်း၊ လက်စွဲလမ်းညွှန်စာအုပ်များ ထုတ် ဝေခြင်းနှင့် တရားရေးယန္တရားများနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လက်လှမ်းမီလာနိုင်စေရန် ထောက်ပံ့ကူညီခြင်း၊ တည်ဆဲဥပဒေများနှင့် တရားရေးယန္တရားများကို အများ ပြည်သူ သိရှိနားလည်လာစေရန် အမြင်ဖွင့်ပညာပေးခြင်းနှင့် ရပ်ရွာအခြေပြုရဲလုပ်ငန်းအတွက် သီးသန့်ရွေး ချယ်ထားသည့် ရဲလုပ်ငန်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့ဝင်များကို လေ့ကျင့်သင်တန်းပေးခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ဆက်လက်ဖော်ဆောင်လျက်ရှိသည့် ပဋိပက္ခမှ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ အာဏာရှင်စနစ်မှ ဒီမိုကရေ စီနှင့် တံခါးပိတ်စီးပွားရေးမှ တံခါးဖွင့်စီးပွားရေးစနစ်ဆီသို့ သုံးဆင့်တက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းများက ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် မကြုံစဖူးထူးကဲလှသည့် အခွင့်အလမ်းတစ်ရပ်ကို ဖန်တီးပေးလျက်ရှိသည်။ သို့သော်လည်း အုပ်ချုပ်ရေး၊ တန်းတူညီမျှမှုမရှိသည့် နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းနှင့် နိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်တို့နှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် ကိစ္စရပ်များကို ဖြေရှင်းနိုင်မှုမရှိသည့် ရလဒ်တစ် ခုအဖြစ် နိုင်ငံတွင်းဒေသအများအပြား၌ အကြမ်းဖက်မှုများ ဆက်လက်ပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဤကဲ့ သို့သော နောက်ခံအခင်းအကျင်းမျိုးရှိနေသည့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လူမှုကူညီရေးအထောက်ပံ့များနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဆက်လက်ဝင်ရောက်လာနေခြင်းသည် လူမှုရေးတင်းမာမှုများနှင့် ဒေသတွင်းပဋိပက္ခများ ကို ပိုမိုဆိုးရွားသွားစေနိုင်သည့် အလားအလာကို ဆောင်ကျဉ်းလာခဲ့သည်။ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၌ နယ်ခံလူထုလူတန်းစားများ၏ စိုးရိပ်ပူပန်မှုများနှင့် အမြင်သဘောထားများကို များစွာထည့်သွင်းစဉ်းစားပေး ရန် အခက်အခဲရှိနိုင်ပါသည်။ ယင်းအစား ချဉ်းကပ်ဆောင်ရွက်မှုနည်းလမ်းများကို ဒေသတွင်းပဋိပက္ခအခင်း အကျင်းများကို မျက်စိလျှမ်းသွားပြီး တင်းမာမှုများကို ပိုမိုမြင့်မားသွားစေနိုင်သည့် နိုင်ငံတကာအကျိုးစီးပွား များအားဖြင့်သာလျှင် မောင်းနှင်ပုံဖော်လျက်ရှိသည်။ Saferworld ၏ ပဋိပက္ခအရေးထည့်သွင်းစဉ်းစားမှု၌ ရပ်ရွာကိုဦးစီးခေါင်းဆောင်စေသည့် ချဉ်းကပ်ဆောင်ရွက်မှုနည်းလမ်းသည် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် နိုင်ငံတကာအလှူရှင်များကို အပြုသဘောဆန်ဆန် မေးခွန်းထုတ်၍ ရပ်ရွာ၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို ထည့် သွင်းစဉ်းစားထားသည့် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်ရလဒ်များ ထွက်ပေါ်လာသည်အထိ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးသွားရန် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။
Saferworld မှနောက်ဆုံးသတင်းများ၊ ထုတ်ဝေမှုများနှင့် မှတ်ချက်များကို ရယူပါ
Email newsletters ကို လက်ခံရရှိရန်
© Saferworld 28 Charles Square, London N1 6HT, UK ဖုန်း +44 (0) 20 7324 4646 Email general@saferworld.org.uk
Registered Charity No. 1043843 Company No. 3015948 | Privacy & Cookies | စည်းမျဉ်းများ
Website ကို Adept မှ ဖန်တီးရေးဆွဲသည်